Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida Loo Xullo qasabadaha Jikada
2020 / 11 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 10960 0
Dhammaan qalabka iyo qalabka, tuubada jikada ayaa laga yaabaa inay tahay mida aan inta badan isticmaalno. Sida laga soo xigtay soo saaraha qasabadda ee KWC, qoyska wadaagga ah waxay isticmaalaan qasabadda jikada in ka badan 40 jeer galabtii. Hadday tahay gacmo dhaqashada, dhaqidda suxuunta, buuxinta dheriga baastada, ama cagaarka oo la dhaqo - tubbada jikada si fiican ayaa loo tababaraa maalin kasta.
Marka inta la joogo waqtigii la iibsan lahaa qasabad cusub, waxaad dooneysaa inaad ogaato habka loo doorto mid ka mid ah oo qabanaya waxqabadkeeda isla markaana ilaalin doona in lagu dhammeeyo taas sannadaha soo socda. Laakiin ha walwelin, buugani waa inuu tuuraa waxyaabo badan oo welwel ah iyo karaahiyo ah in la doorto qasabad cusub.
Miyaad raadineysaa muuqaal guridda, muuqaal casri ah, muuqaal hadda jira, muuqaal adduunka u gurran, ama wax casri ah oo dhaqameed ah? Qalabka Nickel ama daasadaha ayaa ku habboon jikooyinka caadiga ah, naxaasta ama naxaasku waxay ku habboon yihiin adduunka guridda iyo Mareykanka. Kushiinada dharka, iyo qalabka korontada ku shaqeeya ee birta ah ama birta aan lahayn ayaa u muuqda kuwo aad u socda. Ka hel macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qasabada biyaha.
Mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan tuubada wax u iibsan ayaa ah qaabeynta godkaaga. Inta badan saxammada waxay leeyihiin godad ay kula tacaalaan qasabadda, marwalba iyo wixii ka dambeeya oo ay ku jiraan buufis, qalabka saabuunta lagu shubo, cabitaan diiran, ama qasabad biyo nadiif ah leh.
Weelasha hal-godka ah waxaa loogu talagalay qasabadaha-aan kabaxsanayn, sedex god oo godan oo loogu talagalay hal-qasabadaha qasabadaha leh buufinta iyo / ama kaabayaasha, iyo afar god oo loogu talagalay hal-marin ama laba-maamul maacuunta oo leh waxyaabo kala duwan. Haddii aad leedahay saxan hoosta ku xiran ama hore, godadka waxaa lagu qodido doonaa miiska dushiisa ee dhabarka saxanka.
Noocyada qasabada jikada
Tubbada saxda ah ee adiga loogu talagalay waxay ku tiirsan tahay xulashooyinkaaga gaarka ah. Waxaad haysataa dhowr ka soo xusho.
Haddii aad dhaqdo xoogaa yar oo dheriyo waaweyn ah, si joogto ah u buuxi weelasha, ama aad haysato saxan weyn oo waasac ah, qasabad sare oo qaanso ah ayaa adiga kuu noqon karta. High-Arc, waxaa intaa dheer loo yaqaan gooseneck ama qasabadaha-qoorta xad-dhaafka ah, waxay ku siineysaa boos dheeri ah rinjiyeynta. Qasabadaha jikada ee maanta xad-dhaafka ahi waxay si joogto ah u leeyihiin goolal qulqulaya oo qanciya iyo gacmo gacmo duuban waxayna si dhib la’aan u noqon karaan xarunta jikada Tubooyinkaas waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa saxamada qubeyska. Waxay sabab uga dhigaan buuq markii waaskadu fidsan tahay. Inta badan qasabadaha qubeyska waa nooc ka mid ah qaansada xad-dhaafka ah si loogu bixiyo meel ballaaran oo waxtar u leh alaabada lagu dhaqo.
Soo-saarista iyo Pulldown Tubooyinka
Qasabadaha la dheereyn karo waxay leeyihiin madax goos goos ah oo xaggaaga u soo jiidaya, xitaa haddii tubbada la dheereyn karo ay leedahay madax buufin oo hoos ugu sii jeeda dhinaca hoose ee saxanka. Labada ka mid ah waxyaabahaas beddelka ah ayaa kaa caawin doona inaad nadiifiso saxanka iyo dhaqidda alaabada ama nolosha dhirta biyaha ku nool. Soosaarayaasha waxay ku raaxeysanayaan aqoonsiga ugu dhakhsaha badan dhammaan qasabadaha shirkadda sabab macquul ah. Iyagu waa isku dhafka ugu fiican ee qaabka iyo shaqada. Badhan ama badal beddel ayaa ka dhigaya mid fudud in laga beddelo dayuuradda hawo-qaadka ah iyo buufinta. Raadi qalab swivel ah oo heerka 360-ah ah oo si fudud loogu oggolaado gelitaanka dhammaan aagga saxankaaga.
Hal-kabaal oo qasabadaha jikada leh oo lagu buufiyo dhinac
Tubooyinka hal-gacan ayaa wali ka badan sideetan boqolkiiba iibka tubbada waxayna caan ku yihiin dhismaha milkiileyaal. Qasabadahaani waa sahlan yihiin waxayna leeyihiin hal laqabsi oo xakameynaya heerkulka iyo duulaanka. Kuwani waa in lagu sameeyaa buufinta wejiga tani waa wax aad uga jaban marka loo eego qasabadaha lagu buufiyo ee la soo jiidayo. Waxay intaa dheer kaa caawinayaan inaad hesho laamo leh tuubada muuqaalka guridda.
Labo-dhuubo oo tuubooyin ah
Laba-maamul qasabadaha (mid kulul iyo mid qabow) caan kuma aha sida loo daryeelo maxaa yeelay imminka ma fududa in la isticmaalo. Waxay leeyihiin muuqaal caadi ah oo ka dhigaya bayaan adag, xarrago leh Fiktooriya iyo madbakhyada kale qaabka waqtiga ku jira.
Qasabadaha taabashadu waa kuwo aan caadi ahayn oo waxay helayaan tiro caan ah oo sii kordheysa. Tuubbooyinka jikada ee aan la faaruqin ayaa laga shidi karaa oo lagu shubi karaa iyadoo la taaban karo taabashada gacanta ama gacanta oo keliya. Tuubbooyinkaani waxay ku soo noqdaan kuwo jikada leh "gabow ku dhow" ama naafada ah. Kuwani waa kuwa ugu sarreeya ee lagu daro saxanka jikada maxaa yeelay waxaa lagu shidi karaa gacmo lagu ilaaliyo cajiinka ama burka. Waxay sidoo kale faa'iido u leeyihiin saxanka qubeyska.
Wall Qasabadaha jikada
Sidaad rumeysan karto, kuwani waxay ku xiran yihiin gidaarka ka sarreeya saxanka. Waxay si joogto ah u muuqdaan oo leh sagxadaha beeraha iyo mararka qaarkood iyagoo keenaya saxamada qubeyska. Qasabadahaani waxay si aad ah u caan baxayaan maaddaama duubka ama saxanka ku yaal beerta ay guul weyn u tahay ku dhowaad jikada oo dhan. Xusuusnow ka dib isticmaalka tuubada, biyuhu waxay keenaan baahida loo qabo inay ka soo baxaan darbiga ka sarreeya saxanka.
Hore:: Qasabadaha jikada dib loo eegay - Qasabadaha Jikada ee ugu Fiican Dhamaan Naqshadaha iyo Baahiyaha Next: Wowow Madoobaha Madbakha Madow: Qaabka iyo Shaqeynta Hal Qalab
2021 / 05 / 13 755